Ozi Ọma Matiu Dere 11:1-30
Jizọs toro Jọn Onye Na-eme Baptizim (1-15)
Jizọs kọchara ọgbọ na-egeghị ya ntị (16-24)
Jizọs toro Nna ya maka ịhọrọ ndị na-enweghị ihe ha bụ (25-27)
Yok Jizọs na-eme ka e nweta ume (28-30)
11 Mgbe Jizọs gwachara mmadụ iri na abụọ ahụ na-eso ụzọ ya ihe ha kwesịrị ime, o si ebe ahụ gawa izi ihe na ikwusa ozi ọma n’obodo ndị ọzọ.+ 2 Ma mgbe Jọn nọ n’ụlọ mkpọrọ nụ+ banyere ọrụ dị iche iche Kraịst na-arụ, o ziri ndị na-eso ụzọ ya+ 3 ka ha gaa sị ya: “Ọ̀ bụ gị bụ Onye anyị na-atụ anya ya kemgbe, ka è nwere onye ọzọ ga-abịa?”+ 4 Jizọs sịrị ha: “Gaanụ kọọrọ Jọn ihe unu na-anụ na ihe unu na-ahụ:+ 5 Ndị ìsì na-ahụzi ụzọ,+ ndị ngwọrọ na-ejekwa ije. A na-eme ka ndị ekpenta+ dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụkwa ihe. A na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ, a na-ezikwa ndị ogbenye ozi ọma.+ 6 Onye ihe gbasara m na-anaghị eme obi abụọ* na-enwe obi ụtọ.”+ 7 Mgbe ha lawara, Jizọs malitere ịgwa ìgwè mmadụ ahụ banyere Jọn, sị: “Gịnị ka unu gara ịhụ n’ala ịkpa?+ Ọ̀ bụ ahịhịa amị nke ifufe na-ebugharị?+ 8 Gịnịzi ka unu gara ịhụ? Ọ̀ bụ onye yi uwe mara mma?* N’eziokwu, ndị yi uwe mara mma nọ n’ụlọ ndị eze. 9 Gịnịkwanụ mere unu ji gaa? Ọ̀ bụ ịhụ onye amụma? N’eziokwu, ana m asị unu, ọ bụ onye karịrị onye amụma.+ 10 Onye a bụ onye ahụ e dere banyere ya, sị: ‘Lee, m na-ezipụ onye ozi m ga-ebu gị ụzọ,* ọ ga-edozikwa ụzọ ị ga-esi bịa.’+ 11 N’eziokwu, ana m asị unu, n’ime ndị niile ụmụ nwaanyị mụrụ, o nwebeghị onye ka Jọn Onye Na-eme Baptizim ukwuu, ma onye dị ala n’Alaeze eluigwe ka ya ukwuu.+ 12 Malite n’ụbọchị Jọn Onye Na-eme Baptizim ruo ugbu a, ndị mmadụ na-agbalịsi ike ịbanye n’Alaeze eluigwe, ndị na-agbalịsikwa ike na-abanye na ya.+ 13 N’ihi na tupu oge Jọn, Iwu Mosis na Akwụkwọ Ndị Amụma* niile kwuru ihe ga-eme n’ọdịnihu.+ 14 Ma ùnu kwere ma unu ekweghị, Jọn bụ ‘Ịlaịja ahụ ndị amụma kwuru na ọ ga-abịa.’+ 15 Onye nwere ntị, ya nụ. 16 “Ole ndị ka m ga-eji ọgbọ a tụnyere?+ O yiri ụmụaka ndị nọ ọdụ n’ọma ahịa, na-agwa ndị ha na ha na-egwukọ egwu, 17 sị: ‘Anyị gbuuru unu ọjà, ma unu agbaghị egwú. Anyị bere ezigbo ákwá, ma unu erughị uju.’* 18 Jọn bịara, na-ebu ọnụ, ọ naghịkwa aṅụ mmanya, ma ndị mmadụ na-asị, ‘Mmụọ ọjọọ ji ya.’ 19 Nwa nke mmadụ bịara na-eri ihe, na-aṅụkwa mmanya,+ ma ndị mmadụ na-asị, ‘Ọ na-eri oké nri, na-aṅụkwa oké mmanya. Ọ bụ enyi ndị ọnaụtụ na ndị mmehie.’+ Ma, ihe na-egosi na mmadụ ma ihe bụ ihe ndị dị mma ọ na-eme.”+ 20 Ọ maliteziri ịkọcha obodo ndị ọ kacha rụọ ọrụ ebube na ha, n’ihi na ha echegharịghị. 21 Ọ sịrị: “Korezin na Betsaịda, unu ga-ata ahụhụ, n’ihi na ọ bụrụ na ọ bụ na Taya na Saịdọn ka a rụrụ ọrụ ebube ndị a rụrụ n’ime unu, ha gaara echegharị kemgbe, yiri ákwà iru uju nọdụ ọdụ ná ntụ.+ 22 Ma ana m asị unu, ọ ga-adịrị Taya na Saịdọn mfe n’Ụbọchị Ikpe karịa unu.+ 23 Gịnwa kwa, Kapaniọm,+ à ga-ebuli gị elu ruo eluigwe? Ị ga-agbadaru n’ili,*+ n’ihi na ọ bụrụ na ọ bụ na Sọdọm ka a rụrụ ọrụ ebube ndị a rụrụ n’ime gị, ọ gaara adị ruo taa. 24 Ma ana m asị unu, ọ ga-adịrị Sọdọm mfe n’Ụbọchị Ikpe karịa gị.”+ 25 N’oge ahụ, Jizọs kwuru, sị: “Nna, Onyenwe eluigwe na ụwa, ana m eto gị n’ihu ọha n’ihi na i zochiiri ndị ma ihe na ndị ọkachamara ihe ndị a ma mee ka ụmụaka mara ha.+ 26 Nna, ọ bụ otú ị chọrọ ya.” 27 Jizọs sịkwara: “Nna m enyefeela m ihe niile.+ O nweghị onye ma m* nke ọma ma e wezụga Nna m.+ O nweghịkwa onye ma Nna m nke ọma ma e wezụga mụnwa na onye ọ bụla m chọrọ ịkụziri gbasara ya.+ 28 Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-arụgbu onwe unu n’ọrụ, ndị e bokwara ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu nweta ume. 29 Nyaranụ yok m, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ, dịkwa umeala n’obi,+ unu* ga-enwetakwa ume. 30 N’ihi na yok m anaghị egbu mgbu, ibu m dịkwa mfe.”
^ Ma ọ bụ “Onye na-enweghị ihe mere ọ ga-eji hapụ inwe okwukwe na m.”
^ Ma ọ bụ “uwe dị yọrịị.”
^ Ma ọ bụ “unu etighị aka n’obi n’iru uju.”